प्रदेश ५ को सभामुखमा घर्तीको उम्मेदवारी
बुटवल / प्रदेश नं ५ का सभामुखका लागि नेकपा(माओवादी केन्द्र)का पूर्णबहादुर घर्तीले आज उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
प्रदेशसभा संसद् सचिवालयमा आज बिहान १०ः३० बजे नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) अर्थात् वाम गठबन्धनका संयुक्त उम्मेदवार घर्तीले माओवादी केन्द्र प्रदेश नं ५ का प्रमुख सचेतक दधिराम न्यौपानेको प्रस्ताव र एमाले प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालको समर्थनमा उम्मेदवारी गरेका हुन् ।
रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित घर्तीलाई प्रदेश नं ५ को सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले दुई दिन अगाडि मात्र गरेको थियो ।
संसद्मा वाम गठबन्धनको बहुमत छ । अठहत्तर सांसदमध्ये गठबन्धनसँग ६१ सांसद छन् । संसद्को तेस्रो शक्ति काँग्रेस र अरु दलले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छैनन् । वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका घर्ती सभामुखमा एकल उम्मेदवार हुने र सर्वसम्मत निर्वाचित हुने अवस्था देखिएको छ ।
काँग्रेस सांसद वीरबहादुर रानाले काँग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको बताए । काँग्रेसले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेतासमेत चयन गर्न सकेको छैन । उहाँले वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेको र आफूहरुले सरकार बनाउने सम्भावना नरहेकाले दलको नेता र सभामुखको उम्मेदवारीमा कुनै निर्णय नभएको बताए ।
उम्मेदवारी दर्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता घर्तीले प्रदेशसभालाई व्यवस्थित, मर्यादित र विवादरहित ढंगले सञ्चालन गरिने प्रतिक्रिया दिए । उनले प्रदेश नं ५ लाई समृद्ध बनाउन सबै दललाई एकैसाथ लिएर अघि बढ्ने बताए ।
प्रदेश ५ को २८ अर्ब ९ करोड ३ लाखको बजेट सार्वजनिक (पूर्ण पाठ)
काठमाडौँ । प्रदेश ५ को सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्रीको समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार चालु खर्च तर्फ ११ अर्ब ४६ करोड
प्रदेश ५ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित
रुपन्देही । प्रदेश नं ५ को सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आज सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेश नं ५ प्रदेशसभामा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले नीति कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेश ५ मा जनप्रतिनिधिको तलब तोकियो, कसले कति पाउने भए ?
बुटवल । प्रदेश नं ५ का प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रदेशसभाको जेठ १६ गते बसेको बैठकले विधेयक
प्रदेश ५ मा संसद् विकास कोष नआएकामा सांसदहरुको असन्तुष्टि
बुटवल । प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्यले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमले समेटेका विषय कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने हो कि भनी आशंका व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिलगत्तै
पोल्याण्डलाई स्तब्ध पर्दै सेनेगलको विश्वकपमा विजयी सुरुवात
व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्न थप पहल हुन्छ – प्रधानमन्त्री ओली
दुई राप्रपाबीच एकता प्रक्रिया शुरु, संयुक्त कार्यदलको पहिलो बैठक बस्यो
सरकार संविधान र प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्न उद्धत – काँग्रेस सभापति देउवा
पोखरा प्रिमियर लिगको घोषणा, आगामी कार्तिकमा आयोजना हुने
प्रहरीलाई २ हजार नगद नदिए पछि सामान भन्सार चलान गरिएको आरोप
वरिष्ठ डा. उपेन्द्र देवकोटाको अन्त्येष्टि सम्पन्न
कोलोम्बियाका कार्लोस सान्चेजले पाए यस विश्वकपको पहिलो रातो कार्ड
भेडेटारस्थित भोजपुरे खोलामा बस पल्टिदा ३७ घाईते